TogaHerer: TOLOW UMMADEY ODAYGII AWOOWGEEN SHIIKH ISXAAQ MA HADUU DHALAA WAA MAXAY BEESHA KUUL CARRE?? DOOD U FURAN DHAMMAAN DADKA SOMALILAND
TOLOW UMMADEY ODAYGII AWOOWGEEN SHIIKH ISXAAQ MA HADUU DHALAA WAA MAXAY BEESHA KUUL CARRE?? DOOD U FURAN DHAMMAAN DADKA SOMALILAND
Dhamaan dadka rer Somaliland waan salamayaa salaanta islaamka. Adduunka ninkii nilow maxaa aragti kuu laaban. Waxaa yaab iyo an fariir u qadan waa igu noqotay arrin aniga mucjiso igu ah idinka mooyi sidaad u aragtaan. Akhriste arrintasi waxay tahay, waxaa dhawaan hadlay Suldaan Xiiray oo kamid ah Saddexda Suldaan ee beesha bariga Hargaysa leedahay. Wuxuu Suldaanku ka dhawaajiy in beesha Galbeedka Burco H/yoonis qaban doonto shir kuna qaban doonto Burco Gobolka Togdheer.
Shirku waa cadi ceebna maha waxaase qariib ila noqotay waxaa shirka loo qabanaya beel kamid ah H/yoonis oo muddo ka maqnayd. (Cajiib). Suldaan Xiiray wuxuu waliba ku sii adkaystay in dhammaan beeshu ka soo wada qayb gasho. Hadaan ku horeeyo arrinta beesha maqnayd. Horta beelaha H/yoonis waxaan anigu hayay beesha Dalam Muuse oo tariikhaha la sheego iney bari hore guuren degeena Gobolada Mudug. Tariikhda ninba sibuu u hayaa lakiin waxaa lasoo arooriyaa in odeygii beeshaa dhalay ku daalay oo halkaas degey. Waxaa yana lahaya oo jirtay iney waligood beeshasi sheegan jirtay Beesha H/Yoonis. Beesha waxaa ka dhashay Siyaasiga Caanka ah ee Dr. Maxamed Cabdi Gaboose. Waana layaqaana wana Beel kamid aha beelaha H/Yoonis iyo Rer Shiikh Isaxaaqba.
Lakiin arrinta layaabka leh waxay tahay beeshan cusub ee Kuul Carre waxay degaan ahaan degaan Gobolka Sool. Waligood lama maqal manay sheegan iney kamid yihiin Beelaha H/Yoonis. Anigoo aan takoorayn ixtiramayana dadka Muslimka ah, lakiin abtir siinyadu way jirtaa Beeshaas hadda sheeganaysa kuul Carre waxay hore u sheegan jireen oo ku caano maleen beshay ahayeen, kana tirsanayeen.
Haddaba su’aasha doodaydu waxay tahay odeygii awoowgeen Alle godka hownuure ee aynu ku aroorno tolow mahada ayuu dhalaa ?. Waxaan taas u leeyahay dadku qarniyo ayay jireen maxaa maanta keenay Beel cusub oo ku soo biirtay beelaha rer Isaaq. Anig waxaan is idhi laba arrin uun baa keenay doodan. 1.. Beesha H/Yoonis oo muddo oranjirtay Isaaqa annagaa ugu badan tiradii oo malaa soo yaratay. 2….. Degameyn sidii ka dhici jirtay Bariga Somaaliya. Labada arrin ayaan anigu u sibir saarayaa arrinta beeshan cusub.
Haddaba dhammaan dadka rer Somaliland doodani way u furan tahay iney ka soo qayb tanaan. Bal iga soo qanciya Awowgeen mahaduu dhalaa ??
Yasiiin Maxamed Nuur.
Posted by togaherer at 04:13